MARKA HADHUUDH LA GOOSTO HADHUUDH IYO SILAGE: SIFOOYINKA IYO WAKHTIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Shuruudaha iyo hababka loo beero hadhuudhka
Corn waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee lagu beeray beeraha shanta shan qaaradood. Intaa waxaa dheer, dhaqanka - mid ka mid ah ugu caan ah oo loo isticmaalo cuntada. Tusaale ahaan, celceliska deganaha Mexico wuxuu cunaa qiyaastii 90 kg sanadkiiba, iyo deganaha Mareykanka - 73 kg. Galleyda, sida badeecadan waxaa loogu yeeraa dalal badan, waxaa la cunaa ma aha oo keliya dadku, waxaa kale oo lagu quudiyaa xoolaha. Waxaa ku jira xaddi badan oo istaarijin ah iyo tiro fara badan oo nafaqo iyo nafaqo leh. Tixgeli siyaabaha goosashada hadhuudhka miraha iyo silage, mid kasta oo ka mid ah sheybaarkiisa.
Saamaynta waqtiga tayada iyo tirada
Tayada iyo mugga hadhuudh la goosto hadhuudh ama silage ayaa saameeya xilliga goosashada iyo mashiinada loo adeegsado tan. Laga soo bilaabo arrimahan waxay ku xirnaan doonaan xuduudaha sida:
Tirada garaacista khasaaraha;
Tirada macdanta waxyeello gaartay;
Ma taqaanaa? Corn ma aha oo kaliya cuntada cuntada ee dadka iyo xayawaanka. Waxa kale oo loo isticmaalaa soo saarista rinjiga, malabka, balaastikada, dhalada, khamriga, qurxinta.
Waxaa jira talooyin la soo jeediyey oo loogu talagalay wakhtiga ugu wanaagsan iyo wakhtiga la goosanayo hadhuudhka, oo loo hoggansami karo taas oo si weyn u yareeyn karto khasaarihii (ma dhaafi doonaan 2-2.5%) oo waxay gaari karaan alaab tayo sare leh. Gaar ahaan khaas ahaan waxay noqon doontaa lumitaanka inta lagu jiro keydinta dalagga dalagga iyo waqti isku mid ah korinta qoyaanka. Beeruhu wuxuu udiyaariyaa qoyaan, cobsu wuxuu noqdaa mid culus, iyo, sida waafaqsan nidaamka dhirta. Natiijo ahaan, waxaan ku haynaa dhir ama dharbaaxo, taas oo ay adagtahay in laga saaro farsamada. Iyo sheyga laftiisa waa la burburiyaa, cudurrada ku dhaca xaaladahan wanaagsan.
Sidaa darteed, haddii wakhtiga beergooyinku uu dhammaado, khasaaruhu wuxuu kordhin doonaa seddex ilaa afar jeer. Intaas waxaa dheer, waxaa jiri doona xaddi badan oo nijaar ah, oo la burburiyay miro. Qalabkani ma noqon doono mid ku haboon inuu soo dego, suuqgeeduna aad ayuu u hooseeyaa. Xaaladda muhiimka ah ee ururinta tayada tayada sare leh waa farsamada saxda ah. First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo hagaajiyo height jarida ee afkoda - waxaa lagama maarmaan ah in lagu hagaajiyo heerka 10-15 cm dhulka. Goobta noocan oo kale ahi waxay ka hortagi doontaa faafidda cayayaanka ee aboorka.
Baro sida loo habeeyo qamadiga xilliga qaboobaha, dabacasaha, bakeeriga, xididdo iyo karootada.
Beeralayda, si loo soo saaro dalagkan dalagga, xayawaanka isticmaalka isku-darrayaasha (dhammaan noocyada), kuwaas oo leh qalab wax lagu tumayo ama qalab ah.
Corn waa la goostay hadhuudh labadii siyaabood:
jarida cob (oo leh ama aan lahayn nadiifin);
hadhuudh buraash ah.
Caadi ahaan, isku darka soo socda ayaa loo isticmaalaa gallayda gallayda ee galleyda: "Khersonets-7", "Khersonets-200", KOP-1, KSKU-6, hadhuudh la goynaya PPK-4. Si wadajir ah ula socdaan farsamadan waxay sidoo kale isticmaalaan madax, adigoo isticmaalaya habka aad ku gaari karto geeddi-socodka tiknoolajiyada oo aad u yareyn karto khasaarooyinka. Sidoo kale, madaxa ayaa la bedeli karaa 4-8 saf oo qalab wareejin ah, oo kuu oggolaanaya inaad ka saarto cobs oo aad ku tuurto cawska dhulka ku yaal foomka dhulka. Tan waxaa lagu gaari karaa shaqada qalabka jarista ee hoos yimaada.
Digaagga, miraha miraha waxaa loo goostaa cuntada iyo miraha, miraha - cawska.
Warshad silage ah ayaa laga goostay qashin bakhaar ah oo qashin ah oo kala googooyey oo la googooyey afuufta waxayna ku dhejisaa gawaarida.
Goorta la goosanayo hadhuudh
Waqtiga iyo muddada beergooyska ee warshadda hadhuudhka ah, habka wax lagu goosanayo iyo qalabka la isticmaalay way kala duwanaan doontaa iyada oo ku xiran hadba in la goosto hadhuudh ama silage.
Wixii miro ah
Iyada oo habkan soo go'ay, yoolalka ugu muhiimsan waa in lumiyo oo waxyeelo alaabta hadhuudhka ah sida ugu yar ee suurtogalka ah, iyo sidoo kale in la gooyo hadhuudhka leh boqolkiiba ugu weyn ee arrinta qalalan. Tan waxaa lagu xaqiijin karaa:
beeritaanka bacaha ee adkaynaya hoyga;
isticmaalka tiknoolajiyad tayo sare leh oo tiknoolajiyad fiican leh.
Corn waa la goostay marka daabka uu ka kooban yahay 60-65% miisaan qallalan. Tilmaamahan waxaa lagu go'aamin karaa joogitaanka lakabka madow ee goobta meerkoodu ku xiran yahay cob. Pips noqon doonaa adag oo dhaldhalaalaya. Haddii aad ka soo saarto dalag marka ay jirto qadar ballaaran oo ah hadhuudh qoyan oo ku jirta, ka dibna wuxuu keenaa waxyeello, kororka saamiga nijiyada, sababta oo ah hadhuudhku mar dambe ma heli doono bandhig fiican oo aan ku habooneyn isticmaalka miraha.
Muddada nadiifinta waa in aysan aheyn wax ka badan laba toddobaad. Sidaa darteed, si looga fogaado yaraanta, sida caadiga ah, Beelaha ku jira shuruudaha kala duwan ee beerta ayaa lagu beeray.
Waa muhiim! Ha ka tegin hadhuudhka beerta illaa xilliga dayrta. Tani waxay horseedi doontaa xaqiiqda ah in ay ku dhici karto cudurro badan oo fungal ah, miraha waxay lumin doonaan kartidooda awoodda inay kufilaan marka ay soo gaadhay barafoobay.
Dalagyada beeraha ee nadiifka ah "Khersonets-7", "Khersonets-200", KSKU-6, KOP-1. Sidoo kale, waxtarka weyn ayaa la gaari karaa marka loo isticmaalo goosashada madaxa madax-wareegista. Maalin maalmaha ka mid, hal isku darka wuxuu ka qaadi karaa ilaa 5 hektar oo beerto. Shuruudaha dhirta loo yaqaan 'Agrotechnical requirements for grain harvesting:
jarista dhererka - 10-15 cm;
dhammeystirida cobsiyada nadiifinta - 96.5%;
cobs jaban - wax ka badan 2%;
heerkulka hagaajinta - 95%;
heerka nadiifinta hadhuudhka - 97%;
luminta hadhuudhka - 0.7%;
burburin - 2.5%;
joogitaanka hadhuudhka ee silo waa 0.8%.
Nadiifinta qoryaha ayaa sidoo kale waxay ku xiran tahay xaddiga uu miraayada u bislaaday. Cabbirta cagaaran waxay noqon doontaa midka ugu qiimo badan uguna nafaqo badan, marka la barbar dhigo abuurka hadhuudhka ah ee gaadhay qiyaasta baaluqa ee dhamaadka marxaladda caanaha. Qoyaanka cagaarka ah ee waqtigaani wuxuu noqon doonaa heerka 65-70% (badarka - 35-55%), waxay yeelan doonaan aashitada dhexdhexaadka ah iyo nadiifinta sonkorta ku filan. Miraha xilligan ayaa ku ururi doona inta ugu badan ee istaarijka ah. Marka hore nadiifinta silo waxaa jiri doona nafaqooyin aad u yar. Qashin goosashada ah, qulqulatada ayaa noqon doonta mid adag oo qalalan. Oo marka ay ka kooban tahay ee tiro cagaaran oo ah qalalan qallalan in ka badan 30% of silage noqon doonaa si liidata nuugay lo'da. Halka, tusaale ahaan, marxaladda qaangaarka ah, cagaarka cagaaran wuxuu awood u siin doonaa inuu sahay siinayo tamar 20% oo aan saameyn ku yeelan waxsoosaarka caanaha.
Waa muhiim! Haddii dalagga hadhuudhku uu barafoobay, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro cagaarka cagaaran ilaa shan maalmood. Mustaqbalka, waxay noqon doontaa mid ku habboon ujeeddooyinkan.
Goobo galley ah oo loogu talagalay silage ayaa la samayn karaa KSS-2.6 nooca la isku daray iyadoo la adeegsanayo qalab dheeraad ah oo PNP-2.4 leh qaboojiye, isaga oo soo qaadaya duubka iyo dhagxaanta. Hal mar, isku-darka isku-dhafan wuxuu soo saaraa qashin, jarjar cagaaran iyo u geynaya gaari.
Shuruudaha beeraha ee qashinka goosashada:
jarista dhererka - 10 cm;
luminta cagaarka ka dib marka la isku daro - 1.5%;
tirada qaybaha dhererka la rabo waa 70%.
Waxaa jira laba hab oo loogu talagalay kaydinta hadhuudhka:
Qalabka kaydinta waa in lagu meeleeyaa meel qalalan oo hawo wanaagsan leh. Qoyaanka waa in uu aad u hooseeya oo aan ka badnayn 15%. Heerka qulqulka rugtu waa inuusan ka badnayn 1.5 m.
Ka hor inta aan la dhigin cobsyada kaydinta, waa in si taxadar leh loo dhigo, caleemaha laga saaro oo si fiican loo qalajiyey si qoyaan ah 13-14%.
Granules for storage waa lagu shubaa weelasha caagagga, sanduuqyada kartoonada ama bacaha dhogorta. Marka lagu ridayo bacaha, waxaa muhiim ah in la hubiyo in aanay kuusan qoyanayn qoyaan, haddii kale abuurka ayaa luminaya awoodda ay u leeyihiin Gagaash. Corn iyadoo leh habkan waxaa lagu kaydiyaa goobaha aan kuleylka lahayn. Nolol maalmeedku waa laba sano. Qoyaanku waa in aysan ka badnayn 13%.
Baro hababka kaydinta waxyaabaha kale ee dalagyada: karootada, basasha, yaanyada, toon, tufaax, qajaarka, baradhada iyo xididdo.
Waxa kale oo aad ku kaydin kartaa miiraha foomka qasacadaysan, sababtoo ah kiiskan ma luminayaan hantida faa'iidada leh iyo qiimaha nafaqada. Sidan oo kale, waxaad ku kaydin kartaa hadhuudh qoyaan leh 30%.
Ma taqaanaa? Corn wuxuu kori karaa oo kaliya nin - waxaa lagu beeray abuurka. In duurka, geedka noocan oo kale ah ma jiraan.
Guriga, meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo hadhuudhka oo dhan waa qaboojiye iyo barafeeyaha. Bacaha ku jira qaboojiyaha, cobs ayaa si fiican u diiray oo biyo ku darsaday cusbo iyo acidified leh liin muddo 10 maalmood ah.
Qaboojiyaha, koollooyinka waxaa la dhigaa meel ka baxsan daaweynta ka dib - waxaa lagu rusheeyaa barafka iyo biyaha kulul la kariyey laba ama saddex daqiiqo. Markaas waxay si fiican u qalajiyey oo ku duudduubay filim duufaan ah. Sidaa daraadeed hadhuudhku waxay ku jiri doonaan inta ugu badan ee nafaqooyinka iyo walxaha waxtar leh waxaana lagu keydin karaa dhammaan xilliga jiilaalka.
Corn waa mid muhiim u ah nafaqada aadanaha iyo xayawaanka. Si aad u hesho cunto tayo sare leh oo nafaqo leh, waxaad u baahan tahay inaad ku nadiifiso dalagga dalagga hadhuudhka ah ee wakhtiga la soo jeediyey oo aan ka baxsaneyn habka soo-goynta muddada fog.